Ipinki: Xa ishishini liBala | Martech Zone
Ipinki: Xa ishishini liBar
NgoMvulo, Juni 1, 2009 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Xa intombi yam eneminyaka eyi-15 yafika ekhaya iphethe i-Victoria Secret bag esandleni sayo ndaphantse ndanesifo. Ndiyawamkela onke amagqabantshintshi kule posi malunga nendlela endimele ukuba ngutata ngayo kwaye kufuneka ndibeke iliso kwindlela yokuthenga kwentombi yam.
Ngokunyaniseka, khange ndicinge ukuba sikhona isizathu sokuba ayokuthenga eVictoria Secret iminyaka emininzi, emininzi. Uyazi… emva kokuba ndifile.
Zonke izihlobo zeentombi zam zinxibe iimpahla ezifanayo ezinesimbo ngoku… zibhalwe pinki ngaphaya kweempundu zabo. Ndifumene into yokuba luphawu olutsha, olubizwa ngegama elinomtsalane lokutsala amantombazana amancinci. Kuya kuvela ukuba ndinyanisile, kodwa bendingazi ukuba uVictoria Secret wayesemva kwayo. UVictoria Secret uyaphuma kunye nabo pinki umgca-kunye newebhusayithi yePinki, umgca weCollegiate wePinki, inethiwekhi yentlalo ebizwa ngokuba Isizwe esiPinki -Ungangqinisisa nge Facebook Ewe umculo, ukhuphelo kunye nomyili wee-t-shirt.
Ndingayiqonda into yokuba uVictoria Secret unqwenela ukwandisa ingqokelela yakhe kwaye afikelele kumaqela ahlukeneyo, kodwa ukufikelela kulutsha oluncinci kubetha kufutshane kakhulu nekhaya. Njengomhlobo olungileyo uAdam Omncinci (Intengiso yaseIndianapolis yokuThengisa) watsho ngokugqibeleleyo,
Ipinki ibonakala njengesiyobisi esiseVictoria Imfihlo yokufumana abasetyhini abancinci ukuba babambise uphawu lwabo kwiminyaka engaphambili.
Okuninzi endothusayo kukuba iVictoria Secret ichonge ulutsha njengamathuba amatsha emarike. Iimpahla zifikeleleke ngakumbi kunezo zaphikisana neAbercrombie & Fitch kunye neHollister… kwaye iyavela ulutsha lucutha iindleko njengaye wonke umntu.
Ngokwam, ndinqwenela ukuba umgca wemveliso ubize kakhulu kum umntwana oneminyaka eli-15 ubudala.
Ukugqibelela kweBrand kufile
Juni 2, 2009 ngo-1: 42 AM
Uxolo andinakuthetha ongathanda ukukuva, ndanditshatile kwiveki enye emva kokuba ndineminyaka eyi-17. Ndiyazi ukuba kunjani ukuba ngumfazi / umntwana. Eli lelona xesha linzima kakhulu kumantombazana, ngequbuliso ilizwe lonke libajongile, kwaye NGABAFAZI, hayi amantombazana. Ingcebiso yam ekuphela kwayo kukuqinisekisa ukuba uyazi ukuba umthanda kangakanani kwaye ukhona ngaye-nokuba kwenzeka ntoni- kwaye unike amathuba amaninzi okuba athathe imisebenzi enzima kunye noxanduva ukuze akwazi ukusebenza ekukhuleni. Qiniseka ukuba uyazi ukuba ichanekile ukuba iphathwe kakuhle nentlonipho ngabafana, kwaye ubekhona ukuze umbambe xa esiwa. (Ngaba oku kuvakala ngathi likhadi lokubulisa? Uxolo) Ukuya kwi-PINK, ndiye ndaphawula ukuba emsebenzini abanye babafazi abaselula baqala ukuthumela ii-imeyile zeshishini ngohlobo olupinki, ezinxulumene noko? Kwaye ngoku sendimdala, ndiyavuma, ndinqwenela ukuba ukuthengisa ngokwesondo kwabasetyhini abancinci kwakungathandwa kangako- okanye kwamkelwe.
Juni 2, 2009 ngo-5: 15 AM
Unceda ukundicacisela into ibenye kwaye yiyo loo nto uninzi lwamantombazana lunegama elithi iPINK kwiimpundu zawo. Ngoku ndiyazi! Enkosi ngokundifundisa kwaye undinike ukutya ukuba intombi yam eneminyaka eyi-8 ikhe ifune iPINKwear. Ayizukwenzeka (okwangoku).